Iindaba-Shenzhen SH-MBR Technology Co, Ltd
Okunye ukungaqondani malunga neNkqubo ye-MBR ⑥
I-Membrane Bioreactor (MBR) yindibaniselwano yenkqubo ye-membrane enje nge-microfiltration okanye i-ultrafiltration ngenkqubo yedreyini esebenzayo, ekhokelela ekufezekiseni iindawo eziphantsi kakhulu eziphilayo kumanzi amdaka anyangiweyo. Iinkqubo zeMembrane ziguqula ilindle ukuba licoce nakumgangatho ophezulu wamanzi. Unyawo oluncinci lwetekhnoloji yonyango lwenza ukuba iinkqubo zidityaniswe kwindalo, indawo entle kunye nokunyanga amanzi amdaka asetyenziselwa ukunkcenkceshela. Isivuno sludge kwinkqubo ye-MBR sisezantsi kakhulu. Umgangatho wamanzi amdaka kwi-MBR ungaphezulu kunamanzi amdaka e-ASP aqhelekileyo. Amanzi amdaka avela kwi-MBR anokusetyenziswa kwakhona kwizicelo zeshishini emva konyango lwe-RO (Reverse Osmosis). Ii-MBRs zinokusebenza kwi-MLSS ephezulu kakhulu (eziTywala eziMiselweyo zoTywala eziMisiweyo) xa kuthelekiswa ne-ASP yesiqhelo (Inkqubo yoDaka oluSebenzayo).
Limalini ixabiso lezixhobo ezisebenzayo zokudibanisa ilindle?
Limalini ixabiso lezixhobo ezisebenzayo zokudibanisa ilindle? Ndiyakholelwa ukuba abathengi abaninzi baya kuwubuza lo mbuzo kwaye bakhathazeke kakhulu ngalo mbuzo. Makhe sijonge imeko eyiyo! Izixhobo zonyango ezihlangeneyo zonyango
Okunye ukungaqondani malunga neNkqubo ye-MBR ⑤
Okunye ukungaqondani malunga neNkqubo ye-MBR ④
Okunye ukungaqondani malunga neNkqubo ye-MBR ③